पर्यटनमा मुर्दा शान्ति ! «
पर्यटनमा मुर्दा शान्ति !
सर्वप्रथम बेलायतका थोमस कुकले सन् १८४१ मा संगठित रूपमा आफ्नै देशका पाँच सय जनालाई रेलमार्फत आफ्नै देश (बेलायत) को ‘लेइस्टर-लेइस्चर’देखि ‘लोउफब्रो-लोउफबोरो’ सम्म भ्रमण गराएका थिए । त्यसैले उनलाई पर्यटनका सुरुवातकर्ता मान्ने गरिन्छ । त्यसयता अर्बाैं मानिसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भएर विश्वका विभिन्न देश घुमिसकेका छन् । कुकले पहिलो पटक आफ्नै देशका पर्यटकलाई रेलमार्फत यात्रा गराएको-घुमाएको मिति सन् १८४१ लाई मान्दा हाल लगभग १८१-१८२ वर्ष भएको छ ।
नेपालमा पनि सन् १९४९-१९५० देखि नै विदेशीलाई पर्यटकका रूपमा घुम्न दिन थालेको मान्ने हो भने लगभग ७० वर्ष भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, सन् १९९० (वि.संं. २०४६) को प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि मात्रै नेपालको पर्यटनले केही बढी महत्वक पाएको मान्न सकिन्छ । त्यसपछि बनेको सरकारले आर्थिक उदारीकण र खुला अर्थव्यवस्थाको वकालत गरेको थियो तापनि तत्कालीन सरकारबाट नेपालको पर्यटन उद्योग–व्यवसायका लागि खासै गर्व गर्न लायक कामहरू भने भएनन् । हुन त नेपालको पर्यटन विकास र विस्तारका लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले केही गरेन त ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । हो, पर्यटन क्षेत्रमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गरेको राम्रो र सम्झन लायक एउटै मात्र काम भनेको ‘नेपाल पर्यटन बोर्ड’को गठन थियो ।
जे होस्, सन् २०१९ को अन्त्यमा फैलन सुरु भएको कोरोना महामारीसँगै विश्वमा पर्यटन आगमन दर ह्वात्तै घट्यो । फलतः सन् २०२० मा नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकको संख्या दुई लाख, त्यो भनेको संख्याकै आधारमा भन्नुपर्दा सन् २०१९ मा भन्दा धेरै ठूलो गिरावट थियो । अर्थात् सन् २०२० मा सन् २०१९ मा भन्दा ८२ प्रतिशतले कमी रहेको थियो, तापनि प्रतिदिन बसाइ अवधि भने बढेर १५.१ दिन रहेको थियो । त्यस्तै सो वर्ष नेपाल भ्रमण गर्न आएका विदेशी पर्यटकले गर्ने प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खर्च पनि बढेको थियो ।
तर, सन् २०२१ मा भने नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकको संख्या १ लाख ४५-५० हजार पनि नपुग्ने पक्काजस्तै छ । किनकि अक्टोबर महिनासम्म १ लाख ३४ हजार चानचुन मात्रै विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएको तथ्यांक रहेको छ । त्यस्तै नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकको तथ्यांक हेर्दा सन् २०१५ को तुलनामा सन् २०१६, सन् २०१७, सन् २०१८ र सन् २०१९ मा लगातार बढिरहेको देखिन्थ्यो । जस्तो सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२ जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार १ सय ९१ जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । तर, सन् २०२० मा भने जम्मा २ लाख ३० हजार ८५ जना विदेशी पर्यटकले मात्रै नेपाल भ्रमण गरेको तथ्यांक छ । तर, नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकले नेपालमा रहँदा–बस्दा गर्ने दैनिक खर्च भने सन् २०१७ को तुलनामा २०१८ घटेको थियो । स्मरणीय छ, सन् २०१७ मा औसतमा एक जना विदेशी पर्यटकले नेपाल बसाइको क्रममा ५५ अमेरिकी डलर दैनिक खर्च गरेको देखिन्छ भने सन् २०१८ मा एक जना विदेशी पर्यटकले औसतमा दैनिक ४४ अमेरिकी डलर खर्च गरेका थिए ।
त्यस्तै यो वर्ष नेपाल भ्रमण गर्न आएका विदेशी पर्यटकको प्रतिव्यक्ति बसाइ अवधि र प्रतिव्यक्ति खर्च गराइको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो वर्ष पनि घट्ने नै देखिन्छ । किनकि सन् २०२० मा धेरैजसो पर्यटक पहिलो पटक नेपाल रहेकै अवस्थामा बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा परेका थिए भने कतिपय पर्यटकचाहिँ कोरोना महामारीबाट बच्न आफ्नो देशभन्दा नेपाल नै सुरक्षित ठानेर आफ्नो देश नफर्केर नेपालमै भिसा थपेर पनि थप समय बसेका थिए ।